ISKA JIR: 10 walxaato oo ay HALIS tahay inaad GOOGLE ka baarto! (Qaybii 2-aad) | Hadalsame Media
ISKA JIR: 10 walxaato oo ay HALIS tahay inaad GOOGLE ka baarto! (Qaybii 2-aad)
(Hadalsame) 14 Okt 2019 – Waxaa jira 10 walxaato oo aysan wanaagsanayn inaad Google gareeyso ama ku baarto matoorka dunida ugu wayn ee internet-ka wax lagaga baaro. Halkan ka eeg qaybtii 1-aad.
6 – XAALADDA MAQAARKA
Waxay ku wanaagsan tahay inaad ku war la’aato, waayo waad kusii murgi kartaa, sidoo kale ha google garaynin caabuqyada xubnaha taranka.
5 – SAMBABADA SIGAARYA-CABKA
Anigu sigaar ma cabo, balse qofka sigaarya-cabki wuxuu ka fikiri karaa dhibaatooyinka sambabbada, waxaana barta internet-ka ka buuxa sawirro aad u naxdin badan, kuwaasoo haddii aad aragto aad isku dhex yaaci karto. Dabcan waa jirtaa dood ah in la baari karo haddii ay qofka ka go’an tahay inuu ka tago sigaarka, ha yeeshee waxaa fiican inaad iska dayso.
4 – XAYANAANNADA HALISTA AH
Ka fogoow baarista xayawaannadan, aragtida xayawaannadani waxay qofka u qoonsan karaan inuu habeenkii u seexdo si nabdoon ama inuu xitaa u safro dalalka ay bahalladani ku nool yihiin. Qiyaas adigoo Australia tegey ee uu mas kuu galay tuunjiga lagu fariisto ee musqusha?!! Ha isku baarbaarin arrimahan!
Previous article”Anigu ma taageersani N&N, balse waa la safan ahay marka ay is hayaan SHISHEEYE!” – Siyaasi caan ah
Next articleSomalia oo loo diyaarinayo Ciidamada Cirka ah oo dibedda loo qaadayo (Arag shuruudaha)